Dowladda Somalia oo ka hadashay geerida Hogaamiye ka mid ahaa Daacish – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Dowladda Somalia oo ka hadashay geerida Hogaamiye ka mid ahaa Daacish
Tuuryare 15 April 2019
Hawlgal ay si wada jir ah u filyeen Ciidamada Qaranka iyo saaxiibadooda Maraykanka ayaa lagu dilay Sarkaal Sare oo ka tirsanaa Kooxda Daacish-ta Soomaaliya,sida lagu sheegay War kasoo baxay dowladda Federaalka Soomaaliya.
Howlgalkaan oo ahaa duqayn ayaa ka dhacay deegaan lagu magacaabo xiriirro oo ka tirsan degmada isku shuban ee deegaanada Dowlad Goboleedka Puntland.
Howlka oo dhacay 14-kii April ayaa ahaa mid ka mid ah dadaalada lagu wiiqayo awoodda waxa loogu yeero Argagixisada laguna badbaadinayo Shacabka,waxana lagu dilay hoggaamiye kuxigeenkii Daacish-ta Soomaaliya kaas oo lagu Magacaabi jiray Cabdixakiin Dhoqob.
Dawladda Soomaaliya ayaa mudooyinkii dambe dar-dargalisay Dagaalka ka dhanka ah Alshabaab iyo Daacish, iyada oo Ciidamada Dowladda Soomaaliya ay howlgallo ka fuliyeen deegaano ka tirsan Gobolka Shabeellaha Hoose.
DAAWO: Weerar lagu dilay hogaamiye ka mid ahaa Daacish
Banaanbaxyaal lagu maxkamadeynayo Muqdisho